galmudugnews.com » Website iyo Wargeys Warbaahinta Somaliland baraya Dimiqoradiyada – Faalo uu qoray Dahir Alasow
Home » WARARKA » Website iyo Wargeys Warbaahinta Somaliland baraya Dimiqoradiyada – Faalo uu qoray Dahir Alasow Website iyo Wargeys Warbaahinta Somaliland baraya Dimiqoradiyada – Faalo uu qoray Dahir Alasow galmudug on
Aug 2nd, 2012 //
No Comment Views 16175921 sano kadib Somaliland waxaa ka soo ifbaxay Warbaahin madaxbanaan oo lagu kala magacaabo Halbeegnews.net iyo Wargeys afdheer oo la magacbaxay Hubaal News Paper.
Wargeyskaan iyo Website-kaan oo ay ka hoowlgelayaan khabiiro Saxaafadeed waxay u muuqdaan kuwa suuqa ka saaraya Warbaahinta laga leeyahay Somaliland oo badankood u shaqeeya qaab la mida Xidigtii Oktober ee Kacaankii Mohamed Siyaad Barre.
Dhaqaalo daro iyo qabyaalad ayaa Warbaahinta Somaliland ku qasbay inay barnaamijyadooda noqdaan kuwa aan bulshada xiiso badan u laheyn maxaa yeelay dadku waxay u baahi qabaan Warar xambaarsan xaqiiqo iyo madaxbanaani Saxaafadeed.
Wargeyska Hubaal oo todobaad ka hor ku soo biiray Saaxada Warbaahinta Madaxabanaan ee ka soo baxa Hargeysa ayaa durba noqday mid ruxay quluubta kumanaan qof oo jaleecaya barnaamijyada maalin walba uu daabaco.
Hubaal wuxuu ku hoowl bilaabay habka loo yaqaan Investigative Media,Warbaahinta dabagalka hasse yeeshee wuxuu walaac badan geliyay ganacsato iyo siyaasiyiin ka cabsi qaba inuu dibadda dhigo Ceebalahooda qarsoon.
Siyaasiyiinta iyo Ganacsatada waxay xusul duub ugu jiraan sidii albaabada loogu laabi lahaa Wargeyskaan gilgilay ee Hubaal News Paper laakiin dhinaca kale indhaha Caalamka ayaa hab dareen leh u eegaya tilaabada lagula dhiirado Jariirada Hubaal.
War ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Somaliland ayaa durba hanjabaad iyo caga jugleyn kula dhiiratay Hubaal News paper oo si sharciya uga diiwaangashan Somaliland.
Hanjabaada Wasaaradda Warfaafinta Somaliland oo la rumeeysan yahay inay Ganacsato iyo siyaasiyiin ka hagayaan Daaha gadaashiisa waxaa lagu sheegay in Hubaal News Paper ka diiwaangashaneyn Somaliland hasse yeeshee Maamulka Wargeyska waxay eedeeyntaas kadib soo bandhigeen Dukumiintiyo xaqiijinaya inay si sharciya u diiwaangelsheen Wargeyskooda.
Inkastoo Hubaal yahay Wargeys Local ah hadana Shabaakada Halbeegnews.com ayaa noqotay bartilmaameedka qurba joogta reer Somaliland ka daalacdaan dhacdooyinka xiisaha leh.
Inta badan Warbaahinta Somaliland waxay caan ku yihiin inay ku hadlaan dareenka beelahooda, degaanadooda ama faafiyaan warar ku dhisan rabitaanka shaqsiyaad danleeya laakiin Halbeegnews.com ama .net marka aad booqatid waxaa durba indhahaagu qabanayaan Warar iyo faalooyin ku xiisa gelinaya kuwaas oo dhamaantood xambaarsan dimoqoraadiyad iyo anshax Saxaafadeed.
Xawaaraha Dimoqoraadiyadeed ee Halbeegnews waxay sababtay in Shirkadda Isgaarsiinta ee SOMTEL xanibto in laga booqan karo Internet-ka ay siiso Somaliland taas oo looga gol leeyay in bulshada gudaha joogta laga indha xiro wararka iyo faalooyinka uu Website-ka baahiyo.
Tilaabada Somtel ku xanibtay Halbeegnews waa qodob ka hor imaanaya Sharciyada u yaal IPSW Internet Provider Service World.waxaana jira xeerar Caalamiya oo laga sameeyay hadii Shirkadaha bixiya Internetka xanibaan Websites-yada aan ahayn kuwa lagu daabaco filmada anshax darada iyo aflagaadada diimaha.
Dalalka keligii taliyeyaasha iyo shuuciyiinta maamulaan ayey ka dhacaan in la xanibo Website-yada qora wararka xambaarsan fariimo aan raaligelin naftooda.
Wargeyska lagu magacaabo Waaheen ee ka soo baxa hargeysa ayaa ka dhigan midka kaliya ee wararkiisa loo dhigo hab dimiqoraadiya hasse yeeshee kama marna inuu heysan madaxbanaani uu ku faafiyo xaqiiqooyin jira.
Wargeyska Waaheen waxaa maamula Khabiir ku xeeldheer habka raadinta wararka iyo dhigaalka qoraalka,waxaana lagu tilmaami karaa Wargeys ka Caafimaad qaba qabyaalada .
Xaqiiqadu waxay tahay in Website-yo badan iyo Wargeys waaweyn oo Somaliland laga leeyahay suuqa ka baxayaan hadii aysan wax ka bedelin habka ay ku shaqeeyaan ee ku dhisan qabyaalada,laaluushka iyo Cunsuriyada.
Qorayaasha Wargeysyada Somaliland laga leeyahay waxaa lagu sifeeyn karaa Xeeldheerayaal Saxaafadeed balse dhibka ugu weyn ee ku habsaday waa dhaqaalo daro heysata iyo Cadaadiska beelaha oo ka tan badiyay,sida uu qabo Wariye ajnabiya oo safar shaqo ku tegay Hargeysa bishii dhamaatay ee sanadkaan.
Hargeysa waxaa ku yaal Shirkado Ganacsi kuwaas oo kunturaad iidheh siiya Wargeysyadda iyo Website-yada Somaliland laakiin nasiib daradu waxay tahay Sharuuda ku xiran ee ku hoos qoran heshiiska bixinta iidhehyada.
Form-ka Heshiiska bixinta Iidhehda waxaa ku qoran heshiiskaan wuxuu dhigayaa inaad Shirkada war ku lida ku faafin karin Warbaahintaada,hadii aad ku faafisidna waxaa jabaya kunturaada lagu siiyo ee iidhehda Heshiiskaan.Halkaan saxiix.
Shirkadaha waxay Wargeysyada ka soo baxa Hargeysa siiyaan sanadkasta lacag ugu badnaan dhan laba kun iyo shan boqol oo dollar halka ay bishiina ku sameeystaan Warar iidheh u dhigma kuwaas oo midkasta lagu siiyo lacag dhan todobaatan iyo shan dollar.
Wargeysyada ka soo baxa Hargeysa waxaa daabacadooda ku baxda maalin walba lacag qiyaas ahaan dhan boqol dollar halka ay dheer tahay Mushaarka Wariyeyaasha,kirada Xafiiska,korontada iyo internetka.
Daruufaha gaarsiisan heerkaan ayaa Wargeysyada ku qasbaya inay hoos tagaan Shirkadaha ganacsiga iyo siyaasiyiinta oo ay ka helaan Sandareerooyin lacageed.
Lacagtaan Sandareerada oo loogu magacdari karo Laaluush waxaa ka maarmay oo iska diiday Hubaal News Paper iyo Halbeegnews.net.
Si kastaba ha ahaatee, Hubaal iyo Halbeeg waxay tusaale u noqon karaan Warbaahinta laga leeyahay Somaliland oo raadinta xog dhaba ka doorbiday tebinta warar maalmeed aan xiiso badan laheyn.halka dhinaca kalena la dhihi karo Hubaal iyo Halbeeg waxay dimoqoraadiyada barayaan Warbaahinta Somaliland.
Dahir Alasow, A senior Radio and TV journalist, a leader of a press watchdog ASOJ, the editor of waagacusub.com,member of European Journalists and outstanding commentator with fearless check on actions of the political groups and others players through investigative journalism, plus defender of the public interest and voice to the voiceless through “the truthful tip of his truth pen”
21 sano kadib Somaliland waxaa ka soo ifbaxay Warbaahin madaxbanaan oo lagu kala magacaabo Halbeegnews.net iyo Wargeys afdheer oo la magacbaxay Hubaal News Paper.Wargeyskaan iyo Website-kaan oo ay ka hoowlgelayaan khabiiro Saxaafadeed waxay u muuqdaan kuwa suuqa ka saaraya Warbaahinta laga leeyahay Somaliland oo badankood u shaqeeya qaab la mida Xidigtii Oktober ee Kacaankii Mohamed Siyaad Barre.Dhaqaalo daro iyo qabyaalad ayaa Warbaahinta Somaliland ku qasbay inay barnaamijyadooda noqdaan kuwa aan bulshada xiiso badan u laheyn maxaa yeelay dadku waxay u baahi qabaan Warar xambaarsan xaqiiqo iyo madaxbanaani Saxaafadeed.Wargeyska Hubaal oo todobaad ka hor ku soo biiray Saaxada Warbaahinta Madaxabanaan ee ka soo baxa Hargeysa ayaa durba noqday mid ruxay quluubta kumanaan qof oo jaleecaya barnaamijyada maalin walba uu daabaco.Hubaal wuxuu ku hoowl bilaabay habka loo yaqaan Investigative Media,Warbaahinta dabagalka hasse yeeshee wuxuu walaac badan geliyay ganacsato iyo siyaasiyiin ka cabsi qaba inuu dibadda dhigo Ceebalahooda qarsoon.Siyaasiyiinta iyo Ganacsatada waxay xusul duub ugu jiraan sidii albaabada loogu laabi lahaa Wargeyskaan gilgilay ee Hubaal News Paper laakiin dhinaca kale indhaha Caalamka ayaa hab dareen leh u eegaya tilaabada lagula dhiirado Jariirada Hubaal.War ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Somaliland ayaa durba hanjabaad iyo caga jugleyn kula dhiiratay Hubaal News paper oo si sharciya uga diiwaangashan Somaliland.Hanjabaada Wasaaradda Warfaafinta Somaliland oo la rumeeysan yahay inay Ganacsato iyo siyaasiyiin ka hagayaan Daaha gadaashiisa waxaa lagu sheegay in Hubaal News Paper ka diiwaangashaneyn Somaliland hasse yeeshee Maamulka Wargeyska waxay eedeeyntaas kadib soo bandhigeen Dukumiintiyo xaqiijinaya inay si sharciya u diiwaangelsheen Wargeyskooda.Inkastoo Hubaal yahay Wargeys Local ah hadana Shabaakada Halbeegnews.com ayaa noqotay bartilmaameedka qurba joogta reer Somaliland ka daalacdaan dhacdooyinka xiisaha leh.Inta badan Warbaahinta Somaliland waxay caan ku yihiin inay ku hadlaan dareenka beelahooda, degaanadooda ama faafiyaan warar ku dhisan rabitaanka shaqsiyaad danleeya laakiin Halbeegnews.com ama .net marka aad booqatid waxaa durba indhahaagu qabanayaan Warar iyo faalooyin ku xiisa gelinaya kuwaas oo dhamaantood xambaarsan dimoqoraadiyad iyo anshax Saxaafadeed.Xawaaraha Dimoqoraadiyadeed ee Halbeegnews waxay sababtay in Shirkadda Isgaarsiinta ee SOMTEL xanibto in laga booqan karo Internet-ka ay siiso Somaliland taas oo looga gol leeyay in bulshada gudaha joogta laga indha xiro wararka iyo faalooyinka uu Website-ka baahiyo.Tilaabada Somtel ku xanibtay Halbeegnews waa qodob ka hor imaanaya Sharciyada u yaal IPSW Internet Provider Service World.waxaana jira xeerar Caalamiya oo laga sameeyay hadii Shirkadaha bixiya Internetka xanibaan Websites-yada aan ahayn kuwa lagu daabaco filmada anshax darada iyo aflagaadada diimaha.Dalalka keligii taliyeyaasha iyo shuuciyiinta maamulaan ayey ka dhacaan in la xanibo Website-yada qora wararka xambaarsan fariimo aan raaligelin naftooda.Wargeyska lagu magacaabo Waaheen ee ka soo baxa hargeysa ayaa ka dhigan midka kaliya ee wararkiisa loo dhigo hab dimiqoraadiya hasse yeeshee kama marna inuu heysan madaxbanaani uu ku faafiyo xaqiiqooyin jira.Wargeyska Waaheen waxaa maamula Khabiir ku xeeldheer habka raadinta wararka iyo dhigaalka qoraalka,waxaana lagu tilmaami karaa Wargeys ka Caafimaad qaba qabyaalada .Xaqiiqadu waxay tahay in Website-yo badan iyo Wargeys waaweyn oo Somaliland laga leeyahay suuqa ka baxayaan hadii aysan wax ka bedelin habka ay ku shaqeeyaan ee ku dhisan qabyaalada,laaluushka iyo Cunsuriyada.Qorayaasha Wargeysyada Somaliland laga leeyahay waxaa lagu sifeeyn karaa Xeeldheerayaal Saxaafadeed balse dhibka ugu weyn ee ku habsaday waa dhaqaalo daro heysata iyo Cadaadiska beelaha oo ka tan badiyay,sida uu qabo Wariye ajnabiya oo safar shaqo ku tegay Hargeysa bishii dhamaatay ee sanadkaan.Hargeysa waxaa ku yaal Shirkado Ganacsi kuwaas oo kunturaad iidheh siiya Wargeysyadda iyo Website-yada Somaliland laakiin nasiib daradu waxay tahay Sharuuda ku xiran ee ku hoos qoran heshiiska bixinta iidhehyada.Form-ka Heshiiska bixinta Iidhehda waxaa ku qoran heshiiskaan wuxuu dhigayaa inaad Shirkada war ku lida ku faafin karin Warbaahintaada,hadii aad ku faafisidna waxaa jabaya kunturaada lagu siiyo ee iidhehda Heshiiskaan.Halkaan saxiix.Shirkadaha waxay Wargeysyada ka soo baxa Hargeysa siiyaan sanadkasta lacag ugu badnaan dhan laba kun iyo shan boqol oo dollar halka ay bishiina ku sameeystaan Warar iidheh u dhigma kuwaas oo midkasta lagu siiyo lacag dhan todobaatan iyo shan dollar.Wargeysyada ka soo baxa Hargeysa waxaa daabacadooda ku baxda maalin walba lacag qiyaas ahaan dhan boqol dollar halka ay dheer tahay Mushaarka Wariyeyaasha,kirada Xafiiska,korontada iyo internetka.Daruufaha gaarsiisan heerkaan ayaa Wargeysyada ku qasbaya inay hoos tagaan Shirkadaha ganacsiga iyo siyaasiyiinta oo ay ka helaan Sandareerooyin lacageed.Lacagtaan Sandareerada oo loogu magacdari karo Laaluush waxaa ka maarmay oo iska diiday Hubaal News Paper iyo Halbeegnews.net.Si kastaba ha ahaatee, Hubaal iyo Halbeeg waxay tusaale u noqon karaan Warbaahinta laga leeyahay Somaliland oo raadinta xog dhaba ka doorbiday tebinta warar maalmeed aan xiiso badan laheyn.halka dhinaca kalena la dhihi karo Hubaal iyo Halbeeg waxay dimoqoraadiyada barayaan Warbaahinta Somaliland.By Dahir AlasowDahir Alasow, A senior Radio and TV journalist, a leader of a press watchdog ASOJ, the editor of waagacusub.com,member of European Journalists and outstanding commentator with fearless check on actions of the political groups and others players through investigative journalism, plus defender of the public interest and voice to the voiceless through “the truthful tip of his truth pen”dahiralasow@asoj.orgdahiralasow@waagacusub.comhttp://.dahiralasow.comTel:+31684863567
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19987 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19772 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16377 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16191 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14882 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14343 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14311 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13787 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12888 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12682 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12657 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12369 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12070 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11965 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11684 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11620 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11592 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11580 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11469 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11342 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11256 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11248 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11093 hits Home About